घरमा आगो लाग्दा सेल्फी खिच्ने जनप्रतिनिधि ! - विवेचना
घरमा आगो लाग्दा सेल्फी खिच्ने जनप्रतिनिधि !
January 25, 2018 1,115 Views
उर्लाबारी । सेल्फीका कारण मानिसमा मानवीय समवेदना घट्दै गएको पाइएको छ । मानिसहरू लाशसँग सेल्फी लिइरहेका घटना बाहिर नआएको होइन । सेल्फीकै कारण उर्लाब्ाारी ३ का वडा सदस्य सोमप्रसाद तिम्सिनाको निक्कै आलोचना भएको छ ।
उर्लावारी २ का हेमचन्द्र थापाको घरमा मंगलबार बिहान ९:३० बजे आगलागी हँुदा १५ लाख बराबरको क्षति भएको थियो । आगलागीको समयमा जनप्रतिनिधिहरु आगो निभाउन व्यस्त भइरहँदा नेपाली कांग्रेसबाट वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य भएका सोमप्रसाद तिम्सिना भने सेल्फी हान्न व्यस्त भए । र, उनको निक्कै आलोचना भयो । मानवीय विपत्तिको बेला तिम्सिनाले आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेको सेल्फीको आलोचना भएको हो ।
स्थानीयबासीले आगो निभाउनुको सट्टा सेल्फीमा व्यस्त भएको भन्दै उनले फेसबुकमा पोष्ट गरेको तस्वीरमा निक्कै नराम्रा टिकाटिप्पण्ी गरे । जनप्रतिनिधिले मानवीय विपत्तिमा सहयोग गर्नुपर्ने कि सेल्फी लिनुपर्ने हो, त्यति पनि हेक्का राख्न नसक्ने कस्तो जनप्रतिनिधि भनेर उनको चर्चा चलेको छ । प्रविधिले नै मानिसलाई आत्मकेन्द्रित र एक्लो बनाउँदै लगेको छ । यसको प्रयोगले अशोभनीय र मानिसको समवेदनालाई कम गर्दै लगेको पाइन्छ ।
Previous मोरङमा छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु
Next माछापालनबाट लाखौँ आम्दानी